Salaadda San Marcos de León. ? Si loo Dhibco, Shaqo iyo Jacayl.
Ducada San Marcos de León. Dhammaan salaadda waa xoog badan yihiin, laakiin salaadda si astaan ​​muusik leon ah si loo simaado, jacayl, shaqo iyo xusiddu waa wax gaar ah maadaama Saint Mark u dhow Ciise markii uu halkan joogay.
Injiilka St. Mark ayaa ah tan ugu muhiimsan tan iyo markii uu leeyahay nooca maskaxda ilmaha, sida uu ahaa Marcos wakhtigaas, taas oo ka dhigaysa nooc aan dembi lahayn oo ka buuxa runta in ay ku guuleysato saameynta qof walba oo maraya xuruuf.
Maanta, San Marcos wuxuu noqday xiriirin wax ku ool ah oo la weyddiiyo Ilaah dhammaan codsiyada xoogga leh, iyadoo aan loo eegin sida ay u adag tahay mucjisada la filayo.
Saint Mark, saaxiib Ciise, wuxuu saaxiib la yahay dhamaan kuwa qalbigooda ku ilaalinaya oo u baahan wax jannada laga sameeyo.
1 Salaadaha Saint Mark ee Leon ma shaqeeyaan?
1.1 U soo duceeya Saint Mark of Leon si loo sumeeyo qof
1.2 San Marcos de León duco jacayl aan macquul aheyn
1.3 Salaadda Saint Mark ee Leon ee shaqada
1.4 Salaadda ayaa imaanaysa | jacaylka
Salaadaha Saint Mark ee Leon ma shaqeeyaan?
San Marcos de León wuxuu had iyo jeer u dhawaa Ciise Masiix, sidaa darteed wuxuu weydiisanayaa inuu noqdo mid wax ku ool ah, maxaa yeelay, wuxuu inaga baryeeyaa saaxiibkiis hortiis.
Salaadaha waa in lagu sameeyaa moolka mooyee y oo leh daacadda oo dhan suurta gal, xusuusnow inaan dalbaneyno mucjiso ama xaalad la xalliyo, waana sababtaas awgeed waa inaad si cad u weydiisataa waxa loo baahan yahay.
Tukashada Saint Mark of Leon waa isku mid. Waa lama huraan iimaan.
Saint Maros wuu garanayaa waxa ay tahay in la arko saaxiibkiis oo dhimanaya, wuu ogyahay waxa ay tahay in lagu wacdiyo ereyga Ilaah markii la silcinaayo, waxaa soo gaadhay murugo iyo murugo, cabsi aan la garanayn iyo dhibaatooyinka oo dhan ee la silcin kara.
Tani waa sababta Goormaad codsi sameyneysaa waqti dheer kuma qaadaneyso inuu ka jawaabo, maxaa yeelay isagu wuu garanayaa waxa ku xanuunsan kara halkaan aduunku hada yahay xulufadeena jannada.
Awoodiisa waa infinito, mucjisooyinkiisa aan la koobi karayn. Waxaa jira kumanaan dad ah oo markhaati ka noqon kara awoodeeda, waa tan sababta salaadda San Marcos de León waa kuwo wax ku ool ah.
U soo duceeya Saint Mark of Leon si loo sumeeyo qof
San Marcos de León adiga oo ereyga Masiixa u siday dunida Baryadayda maqal.
Awoodaada iyo go'aankaagu ha gaadho cadaalad hana laga yaabo in cadaawayaashaydu ka adkaadaan kahor San Marcos-ka wanaagsan, iyadoo ciidanka ee Libaaxa iyo awoodiisa xukun wuxuu ka dhigayaa dadka damacsan inay qalad igu sameeyaan Ilaahay hortiisa u jilba joogsadaan oo fikirkooda beddelaan.
Ii ducee adigu kan naftaada u bixiyey si aad u ogeysiisid ereyga Eebbaha Sare, aadna u ajiibo codsigayga ...
(Codsiga waan sameyneynaa)
Ma doonayo inaan qofna shar ka helo iyada, laakiin waxaan ku majaajiloodaa kuwa i dhiba oo i dhiba, si ay iigu soo noqdaan iyaga si qumman oo naxariis leh.
Waxaan jeclahay in aan ku guuleysto xumaanta oo noloshaydana ay noqoto meel nabdoon, waxaas oo dhan waxaan ku weydiisanayaa magaca Ciise Masiix ee Rabbigeenna waxaan kaa baryayaa inaad dhageysato ducadayda quus ah.
Salaada ayaa loo samayn karaa sabab kasta oo midna keli ahaaneed ma aha ama wax ka yar ama ka yar mid kale.
Dadka oo dhami way gudbiyaan baahi waxaana u baahan nahay inaan shafeeco ka hor cirka kazoo tusno waxaan u baahanahay.
El Weydiiso inaad ku tababarto Qofku waa, marar badan, waa shay nolosha ama dhimashada.
Waxaa lagu dabaqi karaa siyaabo badan, sida shaqada, guriga, oo leh qaraabo o saaxiib y amor.
Tukashadan haku raadsanina inaad ku qasbatid ama soo gudbiso rabitaanka dadka kale laakiin inaad awood u yeelato inaad wax yar ka dhaadhiciso si aad u gaarto yool qancin kara dhammaan dhinacyada ku lugta leh.
San Marcos de León duco jacayl aan macquul aheyn
Waxaa barakaysan Saint Mark ee Leon, kan wax kasta oo aan macquul aheyn suurta geliya, oo masduulaagii iyo libaaxyadiina roonaya. Samee (qofka magaciisa) arag dareenkeyga, jaceylkeyga, allabarikeyga.
Waxaan kuugu baryaa in qalbigaaga aan gallad badnayn uu ku dhacay ololka jacaylka. Markaad hurdada ka tooso, waxaan rabaa inaad iga fikirto.
Oh, San Marcos de León, kuwiinad furtay oo aad ku guuleysatay hub ka dhigashada bahalka ugu awoodda badan, marka waxaan kaa codsanayaa inaad u oggolaato burburinteyda inay i tusayaan, kaalay, kaalay, yaan cidkale kaa joojin, ii Jidadka jaceylka ee isdhaafsada kuwaaga, inaad i jeceshahay isla awooda aan ku jeclahay oo aan kugu jeclaado.
Fikradaha ku jira (magaca qofka) waxaan kuu imid, Saint Mark, in riyadaada iyo riyooyinkiinna aad ku dhex nooshihiin magaca Ilaahay, oo jacaylkaaguna qalbigayga ku jeediyo, anna fikirradayda kujiro. .
Igu caawi inaan bogsiiyo wadnahaan ku dhibaateysan dantaada oo aan dhibaatadayda oo dhan u beddelo jacayl isu rog-rogaya.
Had iyo jeer waa lagama maarmaan in la tukado salaadda San Marcos de León jacayl.
Jacaylku waa mid ka mid ah sababaha sababi kara in aadanaha dhammaantiis looga dhigo xiriir joogto ah oo jannada lala yeesho
Ama aan lagu soo celin maxaa xoogaa dhibaato ayaa dhex mareysa lamaanaha duco jacayl San Marcos de León waa awood badan yihiin.
Codsiyada noocan ah waa in qofku kula hadlo daacadnimo buuxda. Xusuusnow in aan la hadlayno qof ku dhibaataysan dunidan dhammaan dhibaatooyinkaas oo dhan waana sababtaas tan uu isagu sifiican noo fahmayo.
Markaad tukanayso shaki shaki kujiraan tamarta xun ee la sii daayay salaada ha soo kicin, taasina waa sababta ay tahay in lagu waydiiyo si iimaan leh, kuna qanacdo in abuuraha ilaaha wax walba diyaar u yahay inuu naga caawiyo, taas oo aan micno lahan waqtiga aan ku maalgelinayno tukashada.
Tukashada iimaan la'aan waxay la mid tahay inaanad waxba samaynayn oo markaad quusto codsi laxiriira jacaylka, iimaanku waa qarsoodiga ka caawinaya in wax walba si dhakhso leh loo xalliyo.
Salaadda Saint Mark ee Leon ee shaqada
Halkan waxaan ahay, San Marcos de León, si aan kuugu adeeco is-hoosaysiinta!
Si aad ugu dhowaato waxa aad sheegtay; Si loo ammaano nimcaddaada aan dhammaad lahayn.
Anigoo ah cibaadada aaminka ah, waxaan had iyo goorba si wanaagsan ugu adeego jaangooyada Ilaah, oo ruuxaygiina wuu igu xoogeeyey Qorniinka quduuska ah.
Sidaa darteed, Wacdiye jecel, waxaan kaa codsanayaa maanta inaad i siiso nimcadaas aad horey u taqaanay ...
(Ka hadal xiisaha ku saabsan shaqada)
Waad ogtihiin in isaga kaliya aan ku doonayo wanaagga naftayda iyo kayga oo keliya waxaanan jeclahay inaan Rabbiga ugu dhowaado. Waan ogahay in lay maqli doono maxaa yeelay ...
Adigu naxariis uun baad tahay.
Weydii San Marcos de León waxkasta oo laxiriira nolosheena shaqada Waa ujeedo muhiim ah oo dhab ah.
Goobteenna shaqada ayaa ah ficil ahaan gurigeenna labaad maadaama ay jiraan saacado badan oo aan halkaa ku qaadno, taasina waa sababtaas oo marar badan ay jiraan xaalado aan waxba ka qaban karno laakiin aan kor ugu qaadno tukashada iimaanka si ay xalka u noqoto.
Tukashadani waxay horseedi kartaa shaqo aan sugaynay in muddo ah ama aan xallinno wixii dhibaato ah ee ka horjoogsanaya hawsheenna inay si sax ah u socoto, shaqo kasta oo aad codsan karto waxaa laga codsan karaa San Marcos wuuna kaa caawin doonaa.
Salaadda ayaa imaanaysa | jacaylka
Anigoo ku baryaya Magacaa Eebbe, oo ah ruuxa xukunka Eebbe. Libaax.
Sidan ayaan kuu sameeyaa salaadda si astaan ​​libaax libaax oo soo socda Waxaan kugu dhaarinayaa inaad iga caawiso sidii aan ku maareyn lahaa shanta dareen.
Fikirka, xukun, iyo doonista (qofka magaciisa) In aanan cunin karin ama seexan karin, cabbi karin ama lugayn karin.
Isaga fikirradiisa ha i saarin oo keliya ilaa cagihiisa hoostooda uu iiga yimaado tallaabo iga dhigaysa mid ka soo toobad keena oo is-hoosaysiiya ula dhaqma ixtiraamka aan dhammaanteen mudan nahay.
Markay tahay 2 waan ku aragaa, 3 waxaan kuu xirayaa, dhiigga aan cabbo iyo qalbiga waxaan ku siinayaa indhahayga indho la’aan ah, rabigeyguna adigaa iska leh, ha ahaato, sidaas noqo.
Waxaan rabnaa inaan ku dhameystirno maqaalkeena ducada San Marcos de León taasi kaalay jacayl.
Waa duco aad u xoog badan oo caan ah.
Waxaa loo duceeyay St Mark iyo San cipriano.
Ducada Saint Nicholas of Bari